८ दीनमा भेटीयो सेतिमा टीकटक बनाउदा खसेकी पवित्रालाई ! यस्तो अबस्थामा पानिमा तैरीरहेपछि Tiktok news - Like For Nepal
८ दीनमा भेटीयो सेतिमा टीकटक बनाउदा खसेकी पवित्रालाई ! यस्तो अबस्थामा पानिमा तैरीरहेपछि Tiktok news
काजु खानु स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै लाभदायक हुने, यस्ता छन् फाइदा ! काजु स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो स्वादमा मिठो हुन्छ त्यसैले बच्चादेखि बुढासम्मले काजु खान रुचाउँछन् ।काजुलाई ड्राइफुडको राजा भनिन्छ काजु स्वास्थ्यको लागि निकै
लाभदायी मानिन्छ । यस्का विभिन्न किसिमका फाइदाहरु छन् । काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ । केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा थपिनगई फुर्ती आउँछ । काजुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । त्यही भएर काजु खाने गर्नाले अनुहार चम्किलो बन्छ ।
काजुलाई पानीमा भिजाएर पिस्ने र यसरी बन्ने लेपले अनुहारमा मसाज गर्नाले अनुहार अझ बढी चम्किलो हुन्छ काजुमा एकप्रकारको तेल पाइन्छ, जसमा भिटामिन–बी प्रचुर मात्रामा हुन्छ । यसले दिमाग तेजिलो बनाउँछ ।हरेक बिहान काजु खाने गर्नाले कोलेस्टेरोलको मात्रा नियन्त्रित रहन्छ । काजु खानाले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढ्छ र डायबेटिज नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ ।
काजुमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, आइरन, जिंक, म्याग्नेसियम, कपर आदि पाइन्छन् । यिनले हड्डी, दाँत आदिलाइ बलियो बनाउनुका साथै शरीरका सबै प्रणालीलाई चुस्त राख्छन् । यी हुन् काजु खानुका फाइदा: १. काजुमा यथेष्ट मात्रामा आइरन तत्व पाइने हुदाँ यसले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी पूरा गर्छ । २. यसमा भरपुर मात्रामा
एन्टी व्यक्टेरियल तत्व हुन्छ । जसले हाम्रो छालालाई सुन्दर बनाई राख्न मद्दत गर्छ । ३. यसमा फस्फोरसको मात्रा यथेष्ट हुन्छ। जसले हाम्रो दाँतलाई मजबुत बनाउँछ । ४. काजु हाम्रो स्वास्थयको लागि पनि निकै लाभदायक छ किनकी यसले हाम्रो शरीरलाई कमजोर हुन दिदैन ।
PrevNEWS 🔴आज ६ गतेको मुख्य समाचार | दशैमा घर फर्किनेलाई नया नियम,२८ % भाडा बढ्यो,कुलमान फेरी जिते मुद्दा
Nextआज मिति २०७८ असोज ६ 22 September 2021 गतेको राशिफल आउनुहोस् आजको दिन कस्तोछत हेर्नुहोस्।